कोरोना बीमा पछि जनतामा बीमाको महत्व बारेमा जनचेतना बढेको छ - Hello Patrika
अन्तर्वार्ता • अर्थवाणिज्य • प्रमुख समाचार
वैश्विक महामारी कोरोना (कोभिड–१९) को कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव परेको छ । साना ठूला सबै किसिमका उद्योग–व्यवसायहरु प्रभावित भएका छन् । यस्तो सन्दर्भमा बीमा बजारको स्थिती र कोरोनाको कारण सिर्जित जटिलताहरुका बीच बीमाको महत्व तथा कोरोना पछिको स्थिती, नीति, योजनाहरुका विषयहरुलाई समेटेर हाम्रा सहकर्मी तथा स्टुडेण्ट्स् कन्सेप्ट पत्रिकाका सम्पादक मोहन श्रेष्ठले गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका वरिष्ठ प्रवन्धक तथा वागमती प्रदेश प्रमुख रुपक के.सी.सँग लिनु भएको अन्र्तवार्ताका केही अंशहरु :-
(विस्तृत अन्र्तवार्ता भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।
तपाईको विचारमा वैश्विक महामारी कोरोना (कोभिड–१९) पछि विमाको महत्वलाई कसरी बुझ्न आवश्यक छ ?
हाम्रो यो अमूल्य जिन्दगीलाई जीवन बीमाले बहुमूल्य बनाईदिन्छ । हाम्रो अमूल्य जिन्दगीलाई जीवनबीमाले बहुमूल्य बनाइदिने क्रममा हाम्रो जीवनका हरेक गतिविधिहरुमा, हाम्रा जीवनका हरेक मोडहरुमा, हाम्रा जीवनका हरेक सफलताका कथाहरुमा, हाम्रो जीवनका हरेक असफलता, हरेक किसिमका कमीकमजोरीमा र हरेक किसिमका दुलर्भ दुर्घटनाजन्य कुराहरुबाट बचेर अगाडि बढ्न जीवनबिमाले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ । नेपाल सरकार बिमा समितिले विश्वव्यापि कोरोना संक्रमण पछि पनि यसको क्षति न्युनिकरण गर्न बिमा हुन्छ भनेर कोभिड लाग्नेवित्तिकै क्षतिपूर्ति पाउने विमाको अवधारणा ल्याएको छ । त्यसले पनि बीमाको सान्दर्भिकता बढाएको छ । बीमाको महत्वलाई अहिलेको वैश्विक महामारीको सन्दर्भमा ल्याईएको कोरोना बीमाबाट पनि धेरै कुराहरु बुझ्न सकिन्छ ।
कोरोनाको कारण सिर्जित बन्दाबन्दि पछि बीमा बजारमा परेको प्रभावलाई यहाँले कसरी डिल गरिरहनु भएको छ ?
बन्दाबन्दीको बीचमा हाम्रा बीमितहरुलाई लक्षित, हाम्रा जो–जो अभिकर्ता साथीहरु हुनुहुन्छ जो–जो हाम्रो व्यवसायिक हिसावमा अभिकर्ता पेशा अँगालेर हामीसँग–सगैं गइरहनु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई लक्षित गरेर, उहाँहरुलाई असाध्यै धेरै सेवासुविधा पु¥याउने उद्देश्यले हामीले यो लकडाउन भएको तिनचार दिनमा हाम्रो वेबसाइटहरु, हाम्रो कम्पनीको प्रतिनिधीमार्फत सातप्रदेशमा सातजना हामी सातप्रमुखमध्ये बाग्मती प्रदेशको स्वयम म आफु पनि बीमितहरुको बीमा शुल्क तिर्ने विषयमा कम्पनीका अन्य विविध विषयहरुमा हामीले अनलाइनमार्फत र फोनमार्फत पनि सम्पर्क व्यक्ति मार्फत हाम्रो कार्यालयबाट धेरै कुराहरु सुसुचित गर्ने वातावरण बनायौं ।
आवश्यक सुचना, जानकारीहरु बन्दाबन्दीको बिचमा हामीले निरन्तररुपमा प्रवाह गर्दै आएका छौं । कोरोनाले उत्पन्न कठिन परिस्थिती पछाडि मान्छेमा बीमाको बारेमा सचेतना, उत्सुकता बढेको छ । बीमा हरदम हामीलाई चाहिने कुरा रहेछ भन्ने बुझेको र नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु बीमाको बारेमा असाध्यै सचेत भएको मैले अनुभव गरेको छुँ । हामीले पनि बीमा जीवनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने बुझाउन हाम्रो सम्पुर्ण सम्यन्त्र, जनशक्ति परिचालन गरिरहेका छौं । आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराईरहेका छौं ।
कोरोनाले उद्योग–व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै प्रभावित गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले त्यस्ता प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई लक्षित के–कस्ता नीति योजना ल्याउँदै छन् ? के–कस्ता निती योजनाको आवश्यकता देख्नु भएको छ ?
उद्योगी व्यवसायीहरुले दूई किसिमको बीमा गर्नुभएको हुन्छ । एउटा आफ्नो उधोग व्यवसायमा जति रकम लगानी गर्नुभएको छ । उहाँहरुले जति मेशिन किन्नुभएको हुन्छ । उहाँहरुले विभिन्न किसिमका प्लान्टहरु स्थापित गर्नुभएको देखि लिएर हरेक सामान ल्याउदा पु¥याउदा आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा जुनखालको बीमा उहाँहरुले गर्नुहुन्छ, त्यो निर्जीवन किसिमको बीमा हो । अर्को उहाँहरुले आफ्नो जीवन बीमा गर्नुभएको हुन्छ । निर्जीवन बीमाले मान्छेको भौतिक उपस्थिति हुन नसकेर व्यवसायमा हुने नोक्सानीबाट हुने क्षतिको पनि बीमा गरिएको हुन्छ । क्षति भएमा उहाँहरुले एक रुपियाँ पनि व्यहोर्नुपर्दैन । त्यो नोक्सानी निर्जीवन बीमाले गरिदिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीले उहाँहरुको कारोवार भएन आर्थिक गतिविधि भएन व्यवसाय भए पनि जोसुकै भए पनि ऋणबाट चल्या हुन्छ । तर आफ्नो हातमुख जोर्न अथवा आफ्नो दैनिक सञ्चालन गर्न जुनखालका खर्चहरु उहाँलाई आउछ त्यो खर्चलाई उहाँहरुको ठुलो अमाउन्टको कतिपय व्यापारीहरुको बिमा हुन्छ । बीमा गरेपछि बीमा कम्पनीबाट पाइने ऋण लगायतका विभिन्न सुविधाहरु लिएर केहि समयमा बिना झन्झट व्यापार संचालन गर्ने आदी सुविधाहरु बिमाबाट फाइदा लिनसक्नुहुन्छ ।
गुराँस लाइफले नेपालमा उत्कृष्ठ बोनस सहितको सुविधाहरु दिईरहेको छ । यसको बारेमा केही बताईदिनुहोस् न ।
जीवन बीमा कम्पनीको इतिहासमै उत्कृष्ट बोनससहितका जीवन बीमा योजनाहरु, हरेक योजनामा पाईने उत्कृष्ट बोनससहितका सेवाहरु हामीसँग छ । त्यही योजनामार्फत हामीले उद्योग–व्यवसाय र आमसर्वसाधारण मान्छेहरुलाई भोलीका दिनमा पनि उत्कृष्ठ जीवन बीमा सेवा दिने हिसाबले हामीले हाम्रा गतिविधिहरु अगाडि बढाएका छौं । नेपालमा बीमा कम्पनीहरु मध्ये हामीले २५ वर्षे अवधिका बीमितहरुको लागि सर्वोत्कृष्ट बोनस घोषणा गरेका छौं ।
विमितहरुले नियमित किस्ताहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको जटिल समयमा विभिन्न पेशा व्यवसाय ठप्प भएका छन् । बीमितहरुलाई किस्ता तिर्न गारो भैरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा रहनु भएका कोही साथीहरु हुनुहुन्छ भनें म यहींबाट भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि बिमा गरेको साथीहरुलाई बिमा लेखको अधीनमा रहेर पाउन सक्ने जुन–जुन सुविधाहरु छन् । हामी दिनसक्छौं । त्यसको लागि अनलाइन सेवा मार्फत र फोनमार्फत सातै प्रदेश कार्यालय र केन्द्रिय कार्यालयमा रहेका हाम्रा प्रतिनिधी साथीहरुले पनि बीमित साथीहरुलाई आवश्यक जानकारी र सुविधा दिदै आएका छौं । भएका सेवासुविधाहरुको जानकारी दिईरहेका छौं । उहाँहरुलाई कुनै खालको अप्ठ्यारो छ भने बिमा समिति, सरकारले नै लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मानेर रिनियल प्रिमियम, रिनिएबल बिमा शुल्कमा लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरेको छ । सरकारकै निर्देशन अनुसार जरिवाना मिनाहा लगायतका सुविधाहरुबाट लाभ उठाउन, कठिन समयमा पाईएका यस्ता सुुविधाहरुमा सहभागी बन्न बीमितहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।